Askar Lagu Dilay Hubna Looga Qaatay Gobalka Baay. – Bogga Calamada.com
Askar Lagu Dilay Hubna Looga Qaatay Gobalka Baay.
Wararka ka imaanaya gobalka Baay ee Konfur Galbeed dalka Somalia waxey sheegayaan in weerar qorsheysan uu ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka kaasi oo lala beegsaday maleeshiyaat ka tirsan maamulka gaala raaca Shariif Sakiin.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey howlgal gaar ah ka fuliyeen Tuulo u dhaxeysa degmooyinka Qansaxdheere iyo Bardaale oo ka wada tirsan gobalka Baay,iyadoona faahfaahin laga helayo weerarkaasi qorsheysan.
Inta la xaqiijiyay weerarkaasi qorsheysan waxaa lagu dilay Saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka Murtad Shariif,sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ee weerarkaasi fuliyay waxey horay u sii qaateen Saddex-dii qori ee ay ku hubeysnaayeen saddex-daasi askari ee werarkaasi qorsheysan ay ku dileen.
Weerarada ka dhanka ah ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaadka maamulka Murtad Shariif Sakiin ayaa joogta ka ah gobollada Bay iyo Bakool waxaana xusid mudan in Mujaahidiinta Al Shabaab ay hareerayn kusoo rogtay inta badan magaalooyinka gumeysiga kujira ee gobolladaasi.